Xubin qoys - InfoFinland
U soo guurista Finland > Tusmo fudud u soo guurayaasha Finland > Xubin qoys
Muddo kordhinta sharciga degenaanshaha
Barashada luuqadda finnishka ah
Guurka iyo wada degenaanshaha
Adeegga qoysaska leh caruurta
Haddii aadan aheyn muwaadin u dhashay wadamada wuqooyi, EU ama muwaadin u dhashay EU oo xubin qoys ah, waxaad u baahan yahay sharciga degenaanshaha. Ka aqriso macluumaad dheeri ah bogga InfoFinlandi ee U imaansha reerka Finland.
Haddii aad tahay muwaadin EU ah, uma baahnid sharciga degenaanshaha ee Finland. Haddii aad muddo saddex bilood ka badan joogeysid Finland waxaad u baahan tahay shahaadada diiwaangelinta degenaansho ee midowga yurub (Unionin kansalaisen rekisteröintitodistus).
Haddii aad tahay muwaadin EU ah, laakiin xubin ka tirsan qoyskaadu oo deggan Finland yahay muwaadin u dhashay EU, waxaad u baahan tahay kaarka degenaanshaha ee xubinimada qoyska (perheenjäsenen oleskelukortti). Ka aqri macluumaad dheeri ah bogga InfoFinlandi ee Muwaadiyiinta Yurubiyanka.
Haddii aad tahay muwaadin u dhashay wadamada Wuqooyi, uma baahnid sharciga degenaanshaha ee Finnishka. Ka aqri macluumaad dheeri ah bogga InfoFinlandi ee Muwaadiniinta u dhashay wuqooyiga Yurub.
Marka aad usoo guurto Finland, aad xafiiska diiwaangelinta (maistraatti) deegaanka aad degan tahay. Xafiiska diiwaangelinta waxaad ka heli kartaa sumadda aqoonsiga Finnishka, helin, marki lagu siinayay ogolaanshaha deganaansha ama la diiwaangelinayay xuquuqdaada joogitaanka ee muwaadinka Midowga Yurub. Xafiiska diiwaangelinta waxaa uu sidoo kale eegayaa in deegaan ahaan lagaaga diiwaan gelin karo Finland. Marka aad haysato meel aad degan tahay, waxaad isticmaali kartaa adeegyada degmada, sida tusaale ahaan adeegyada caafimaadka. Ka aqri macluumaad dheeri ah bogga InfoFinlandi ee Guri degmo ee gudaha Finland.
Haddii aad haysato sharciga degenaanshaha, xasuusnoow in aad waqti fiican dalbato muddo kordhinta shariga degenaanshaha ka hor inta uusan kaa dhicin sharciga. Ka dalbo muddo kordhinta sharcigaaga adeegga internetka ee Enter Finland ama baeta adeegga ee Xaafiiska dal u soo guurista.
Go’aanka ku saabsan ogolaanshaha waa mid lacag ah. Waa in aad sidoo kale bixisaa lacag marka aad dalbaneyso muddo kordhinta sharciga. Macluumaad dheeri ah oo la xiriira dalbashada sharci kordhinta waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi ee Ogolaanshaha sii-socda.
Haddii aad tahay muwaadin u dhashay EU, waxaad dalban kartaa xuquuqda degenaanshaha joogtada ah marka aad muddo shan sano ah degan tahay Finland.
Macluumaad la xiriira barashada luuqadda finnish-ka ah waxaad ka heli kartaa bogga InfoFinlandi ee Luuqadda finnish-ka iyo iswiidhishka. Haddii aad agagaarka Helsinki, agagaarka Tampere ama agagaarka Turku, waxaad shaqsiyan ka raadsan kartaa koorsooyin luuqada Finnish-ka ah oo kugu haboon adeegga Finnishcourses.fi
Haddii aad haysato sharciga degenaansho oo ku saleysan xiriir qoys, waxaad xaq u leedahay in aad ka shaqeysato waxna ka barato Finland. Sidoo kale muwaadinijnta iyo xubnaha kale ee qoysaskooda ee wadamada EU iyo Wuqooyiga Yurub waxaa ay xaq u leeyihiin in ay shaqeysan karaan isla markaasina wax baran karaan.
Ogsoonoow, haddii aad sharciga degenaanshaha ugu horeeya aad ka dalbato Finland, in aadan xaq u yeelaneynin shaqo inta lagaaga ogolaanayo sharciga.
Bogga InfoFinlandi Halkee laga heli karaa shaqo? waxaan ka heleysaa macluumaad ka xiriira sida shaqo looga dalbado Finland. Hadii aad xiiseyneysid in aad sameysatid shirkad aad adigu leedahay, eeg bogga InfoFinlandi ee Samaynta shirkad ganacsi.
Macluumaad la xiriira waxbarashada Finland waxaa laga helayaa bogga InfoFinlandi ee Waxbarashada.
Haddii aad rabtid in aad ku guursato Finland, waxaad macluumaad faa’ido leh ka heleysaa bogga InfoFinlandi ee Guurka.
Macluumaad la xiriira wada degenaanshaha Finland waxaa laga heli karaa bogga InfoFinlandi ee Wada degenaanshaha.
Macluumaad la xiriira furiinka waxaa laga heli karaa bogga InfoFinlandi Furiinka. Ogsoonoow, haddii aad leedahay sharciga degenaanshaha ee ku saleysan xiriir qoys, isbadalka ku imaanaya xiriir qoys, sida tusaale ahaan furiinka, waxay saameyn ku yeelan karaan sharcigaaga degenaansho. Ka aqri macuumaad dheeri ah bogga InfoFinlandi ee Miyaan weyn karaa ogolaanshiyaha joogitaanka?
Bogga InfoFinlandi ee Dhibaatooyinka isqabida iyo xiriirka lammaanaha waxaad ka heli kartaa macluumaad la xiriira halka laga heli karo caawimaad la xiriirta xagga dhibaatooyinka xiriirka.
Manfacyada Keladu bixiso intooda badan waa kuwa aad xaq u yeelan karto, haddii aad Finland si rasmi ah ugu soo guurto. Macluumaad dheeri ah oo la xiriira adeegga bulshada ee Finland waxaad ka heli kartaa bogga InfoFinlandi ee Ammaanka bulsho ee Finland.
Macluumaad la xiriira kaalmada bulsho iyo adeegyada kala duwan ee qoysaska leh caruurta waxaad ka heli kartaa bogga InfoFinlandi ee Kaalmada dhaqaale ee qoysaska iyo Daryeelka caruurta.
Finland waxaa ka jira adeegyada caafimaadka ee dadweynaha iyo gaarka loo leeyahay. Adeegyada caafimaadka ee dadweynaha waxay ka jaban yihiin kuwa gaarka loo leeyahay. Haddii aad deegaan ku leedahay Finland, waxaad isticmaali kartaa adeegyada caafimaad ee dadweynaha. Haddii aad ugu soo guurto Finland sababo la xiriira xagga qoyska, waxaad caadi ahaan deegaan ka heleysaa Finland. Go’aanka diiwaangelinta deegaanka waxaa sameynaya xafiiska diiwaangelinta. Ka aqriso macluumaad dheeri ah bogga InfoFinlandi ee Adeega caafimaadka ee Finland iyo Guri degmo ee gudaha Finland.
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 16.12.2019 Boggan war-celin ka soo dir